WhatsApp inogona kuzvimiririra parunhare, panogona kunge paine matsva emuno maapplication | Linux Vakapindwa muropa
WhatsDesk uye Whatsie, mafomu maviri atisingazodi kana runyerekupe rweWhatsApp rusiri parunhare rwazadzikiswa
WhatsApp ndeiya yekutumira mameseji iyo yakaiswa pane chero nhare mbozha. Ndiani asingazive WhatsApp? Kwemakore gumi ikozvino, zvakatibvumidza kutumira emahara mameseji mameseji kune mamwe madhivha, sekureba sekunge vaine iyo programu yakaiswa. Yaive imwe yekutanga (kana isiri yekutanga) maapplication aibvumidza iwe kutumira mameseji emahara kubva / kune nharembozha, asi nhasi ichiri kubva pachirongwa chekare chakare chinokumanikidza kuvimba nenhamba yefoni, chimwe chinhu chingave mazuva ayo akaverengwa.
Parizvino, kana tichida kushandisa WhatsApp kubva pakombuta, piritsi kana kunyange smartwatch, tinofanirwa kushandisa vhezheni yeWhatsApp Web. Yakatangwa muna Ndira 2015, iri mhando ye "girazi" inoratidza zvese zvinoitika pane nharembozha yedu, asi zvinoenderana nekuti iite basa. Zvimwe zvinoshandiswa seTeregiramu zviri zvemazuva ano uye ivo vanokwanisa kushanda pane akati wandei michina panguva imwe chete, zvisinei kuti ndeye mobile, piritsi, komputa, wachi kana kunyange Smart TV (ini ndakayedza iyo pane Android TV uye inoshanda). Izvi ndizvo zvichave zvichakwanisika kuita iyo mameseji app.
WhatsApp paPC yemahara webhu vhezheni
Runyerekupe rwakatangwa neWABetaInfo, iyo nhoroondo yeTwitter inoongorora zvese zviri mune yakakurumbira meseji kunyorera pasi. Iye ndiye akatitaurira nezvewebhu vhezheni, iyo iPad vhezheni, zvinamirwa, bhizinesi vhezheni… zvakanaka, zvinogara zviri iye. Chinhu chekupedzisira atumira ndeyekuti WhatsApp inoshandisa iwo maseva akafanana neFacebook uye kuti izvi zvinobvumidza shandisa foni imwe chete pane akawanda madhizaini panguva imwe chete. Tichifunga kuti izvi ndizvo zvinodzivirira mavhezheni asiri emafoni, tinogona kungofunga kuti mune ramangwana tinogona kukanganwa nezve mafomu akaita seWhatsDesk kana Whatsie, chero bedzi asina kuvandudzwa.
WABetaInfo inoti "runyerekupe", asi runyerekupe rwese rwaakaburitsa rwazadziswa. Chinhu chakanakisa kuramba wakakahadzika, asi zvinoita sekunge vhezheni yewebhu ichanyangarika munguva pfupi kwete, uye ndinofara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux software » WhatsDesk uye Whatsie, mafomu maviri atisingazodi kana runyerekupe rweWhatsApp rusiri parunhare rwazadzikiswa
wave a akadaro
Zvakanaka, chimwe chinhu icho Mutumwa wekare anga atove nacho.
Pindura kuti uve wave
X-ORG S3 Graphics Mutyairi Akagadziridzwa Kwekutanga Nguva Mumakore Manomwe